Cristiano Ronaldo Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadlay Tababare Ten Hag & Baaqa Uu U Diray Jamaahiirta Kooxda - Laacib
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadlay Tababare Ten Hag & Baaqa Uu U Diray Jamaahiirta Kooxda
Cristiano Ronaldo Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadlay Tababare Ten Hag & Baaqa Uu U Diray Jamaahiirta Kooxda
Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay tababaraha xagaaga la wareegi doona shaqada kooxdaas ee Erik Ten Hag.
Ten Hag oo dhawaan horyaalkiisii saddexaad kula soo guuleystay Ajax ayaa qabanaya shaqada Old Trafford oo ay hawlo badan oo xalin u baahani ku sugayaan.
Man United oo haatan booska lixaad ka joogta Premier League ayaa xilli ciyaareed adagi soo maray. Ronaldo ayaa haatan sheegay in safka kooxdu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo tababaraha Dutch-ka ah balse diray baaqa ah in macalinkaasi u baahan yahay in loo samro oo wakhti la siiyo.
Ronaldo ayaa Website-ka rasmiga ah ee United u sheegay “Waxa aan isaga ka ogahay waxa weeye inuu shaqo cajiib ah ka qabtay Ajax, kaasi waa tababare khibrad leh balse waxaynu u baahanahay inaynu wakhti siino isaga. Arrimuhu waxay u baahan yihiin inay isu bedelaan sida uu isagu doonayo”.
“Waanu faraxsanahay, kaliya maaha ka ciyaartoy ahaan balse ka taageerayaal ahaan sidoo kale. Wanaag oo dhan ayaan isaga u rajaynayaa aynu aamino midaas, sanadka dambe koobab ayaynu ku guuleysanaynaa”.
Walow ay Man United joogtaynta bandhig wanaagsan kusoo dhibtootay xilli ciyaareedkan haddana Ronaldo ayaa 24 gool oo 18 kamid ahi Premier League yihiin soo dhaliyay.
Heshiiska uu 37 sano jirkaasi ku joogo Old Trafford ayaa ah mid dhacaya xagaaga dambe ee 2023 waxaana ka go’an inuu xilli ciyaareedka dambe ka dhigo mid sidan ka wanaagsan.
Erik ayaa saddex horyaal lasoo qaaday Ajax sidoo kalena laba jeer lasoo hantiyay KNVB Cup balse culays badan ayaa ku fuuli doona inuu saamayn deg-deg ah ku sameeyo Red Devils.